Ngaba imidlalo ye-Intanethi iyinceda njani indalo esingqongileyo ukuba izihlambulule kungcoliseko? 2022
Oktobha 25, 2021 U-Okpara Francis
Ngaba imidlalo ye-Intanethi iyinceda njani indalo esingqongileyo ukuba izihlambulule kungcoliseko?
Ingxaki yemozulu ligama elisetyenziswa ukuchaza ukufudumala kwehlabathi kunye nokutshintsha kwemozulu okwenzekayo kwiplanethi yethu yomhlaba. I-Covid-19 icinezele utshintsho lwemozulu ngonyaka ka-2020. Apho i-covid 19 iye yaba ngoyena bhubhani usongelayo, njengoko ibichaphazela ubomi babantu kakhulu kunokutshintsha kwemozulu.
Njengoko umhlaba wonke wawusiya kwindawo evalelwe abantu kunye nokuvalwa kwekhaya, izinto ezininzi zendalo zabuyela esiqhelweni. Kubekho ukuncipha kokukhutshwa kwekhabhoni kwiplanethi. ICoronavirus isandula ukumisa ukukhutshwa kwekhabhoni kangangexesha elithile, kodwa ayizukuhlala ixesha elide, njengoko izinto ziya kubuyela esiqhelweni emva koko ukukhutshwa kwekhabhoni kulindeleke ukuba kunyuke kwakhona.
Le coronavirus inike indalo ithuba lokuzicoca kungcoliseko, njengoko zonke izinto zoshishino kunye nezinto ezibangela ungcoliseko zingasebenzi kutshixo, kungoko kunceda okusingqongileyo.
Abantu abaninzi ababethanda ukuphuma bayokuzipholela nabahlobo babo kunye nosapho bahlala ngaphakathi ixesha elide. xa izinto ziya kubuyela kwisiqhelo ke ungandwendwela yekhasino eNorway ukuba nexesha fun. kodwa okwangoku, ukuba ungumlandeli wokufa wekhasino kunye nemidlalo yekhasino ungajonga ezininzi beste nettcasino.
Ukuba senza yonke indima yethu ngoko utshintsho lunokubonwa, kwaye apha sithetha ngemidlalo ye-intanethi. Njengoko wonke umntu uxhalabile malunga nokutshintsha kwemozulu, kunjalo ngabanini bale midlalo ye-intanethi.
Kule blog, siza kukuxelela malunga nemiba eyahlukeneyo yendlela le midlalo ye-intanethi inceda ngayo okusingqongileyo ukuba ihlambuluke. Le midlalo ye-intanethi inceda ekwenzeni abantu bazi ngokusingqongileyo.
Umxholo othi "Dlala iPlanethi"
Ishishini lokudlala lisebenzisa iikhompyutha ezahlukeneyo zamandla aphezulu kunye nezixhobo ezisebenzisa umbane ukuqhuba. Ukuza kuthi ga ngoku kwisizwe esaphuhlayo, owona mthombo mkhulu wombane uveliswa kumalahle, nto leyo enefuthe eliphezulu kokusingqongileyo njengoko le mithombo ikhupha ukukhutshwa kwekhabhoni kwinqanaba elikhulu.
Kodwa okubalulekileyo, kwangaxeshanye, abantu baya bezazi iimpembelelo ezimandundu zokutshintsha kwemozulu, yiyo loo nto bethatha amanyathelo abalulekileyo ekunciphiseni izinga lokukhutshwa kwekhabhoni.
Ukuba sithetha ngemidlalo, ke le midlalo ye-intanethi ibandakanye amanqaku amaninzi kunye nohlaziyo njengomlinganiselo wokwenza abantu batyekele ngakumbi ekulondolozeni iplanethi. Benze umxholo wabo womdlalo wokudlalela iplanethi.
Koku, babandakanya ibali kunye nomxholo wemidlalo ejikeleze ukusindisa iplanethi.
Makhe sijonge imidlalo embalwa eyenza utshintsho oluphawulekayo kwimidlalo yayo ukuxhasa ukusindisa umhlaba.
Umdlalo we-transformer owenziwe yinkawu yendawo uquka imixholo emininzi yokusingqongileyo. Ibali labo lokuqala lisekelwe kumxholo wokuchola amandla ahlaziyekayo. Kuhambo, bavuna iindlela zamandla amatsha zokuvuna iimfuno zamandla eziguquli.
Izitudiyo zePixelberry zenze ukhetho lwazo lomdlalo, apho umdlalo wawugxile kumfazi omncinci ekufuneka athathe utshintsho oluhlukeneyo lokusingqongileyo, ukuze asindise idolophu yakhe eselunxwemeni kutshintsho olubi lwemozulu.
Ishishini lemidlalo liyiqondile indima yokwenza abantu bazi ngokulondoloza iplanethi. Benza iinzame ezinkulu ekwenzeni kunye nokwenza abadlali bacinge ngesityalo.
Imidlalo emininzi isebenzela iqhinga lokudlalela iplanethi. Imidlalo emitsha emininzi iyilwe ngomxholo wokusindisa iplanethi.
Basebenzela ukwenza i-carbon engathathi hlangothi iprinte kwiplanethi ngokunciphisa ukukhutshwa kwekhabhoni ukuya kwinqanaba elincinci kunye nexesha.
Uninzi lwezigebenga ezinkulu zetekhnoloji zibalasele kumanyathelo amakhulu okwenza i-zero carbon ekhutshwayo kwindawo ezisebenza kuyo. Ngokutsho kwengcaphephe yethu yekhasino Kristoffer Haagensen, kukho ezithile imidlalo ye-intanethi encedayo indawo esingqongileyo izicoca kungcoliseko. Unokufunda ngakumbi malunga nobuchule beKristoffer.
Ngelixa ilizwe liqaphela iziphumo ezibi zokutshintsha kwemozulu, uninzi lwabo lusebenzela ukwehlisa ingxaki yemozulu. Njengoko kuya kuba nzima kakhulu kwisizukulwana esizayo ukuba siphile kulo mhlaba.
Ulutsha lusisizukulwana esitsha kwaye luyakuthatha amanyathelo abalulekileyo okusingqongileyo, ngoko ke ishishini lemidlalo lisebenza kumanyathelo okwenza ulutsha lwazi ngentlekele yemozulu. Kwakhona, bakhuthaza ulutsha ukuba luthathe amanyathelo achaphazela indalo esingqongileyo.
I-A1 CBD / Gamb / Umdlalo Uxhasiwe
Post Previous:Uphengululo lweKhasino likaBetSofa: Inikezela ngantoni kuBadlali baMva?
Okulandelayo Post:Kutheni ukufundela kwelinye ilizwe ngamava atshintsha ubomi